Mareykanka oo joojiyay shidaalkii uu siin jiray diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga - Halbeeg News
Mareykanka oo joojiyay shidaalkii uu siin jiray diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga
WASHINGTON( HALBEEG)- Sida laga soo xigtay BBC-da masuuliyiin u dhalatay dalka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu joojiyay shidaalkii uu ku sahayi jiray dayuuradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hoggaamiyo Sucuudiga ee dagaalka ka wada dalka Yemen.
Labadan masuul oo ka gaabsaday in warbaahintu ay magacyadoodu adeegsato ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay socdaan wadahadallo lagu joojinayo shidaal siinta dayuuradaha isbahaysiga ee uu Mareykanku bixin jiray waxayna tilmaameen in go’aanka kama dambeysta ah looga fadhiyo dowladda Sucuudiga maadaama ay iyada ugu jeeb buurantahay isbahaysiga.
Dhanka kale dowladaha isbahaysiga ayaa iyana ku dhawaaqay in ay Washington ka codsadeen joojinta shidaalkii ay ku sahayi jirtay diyaaradhooda dagaalka ka wada Yemen.
Bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee Sucuudiga ayaa u qornaa sidatan “ Dowladda Sucuudiga iyo saaxiibbada kula jira Isbahaysiga waxaa ay awood u leeyihiin bixinta shidaalka diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka ka wada Yemen si horay loogu sii ambaqaado hirgelinta hannaanka sharci gaadhsiinta Yemen, iyada oo isbahaysigu uu la tashanayo Mareykana oo xulafo la ah ayay codsadeen in gabi ahaan dowladda Mareykanka ay joojiso shidaalka dayuuradaha dagaalka’’ ayaa lagu yidhi bayaanka.
Dhanka kale wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka, James Mattis ayaa sheegay in arrinka la xidhiidha joojinta shidaalka dayuuradaha dagaalka is bahaysiga inuu yahay mid ay kala tashadeen Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Wasiirka ayaa intaa sii raaciyay in dalkiisa uu sii wadi doono dadaallada uu ku doonayo in hoos loogu dhigo tirada dadka rayidka ah ee ku dhibaatoobaya dagaalka Yemen iyo waliba ballaadhinta gar gaarka deg degga ah ee loo fidinayo shacabka Yemen.
Mattis ayaa yidhi “Washington waxay qorsheyneysaa dhisidda ciidammo Yamaniyiin ah oo difaaca shacabkood, ilaaliya soohdimaha dalka una babac dhiga xera taraarka Al-Qaacida iyo Daacish.
Sida laga soo xigtay Washington post maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa kal hore hoosta ka xarriiqay in gabi ahaan la joojiyo kaalamooyinka la siiyo dayuuradaha isbahaysiga ee duqeynta ka wada Yemen kuwaasoo adeegsada shidaal fara badan maadaama ay hawada ku jiraan wakhti aad u dheer si ay u fuliyeen duqeymaha bartilmaameedkooda.
Joojinta shidaalka uu Mareykanka siin jiray diyaaradaha isbahaysiga ayaa ka dambeeyay kadib dhaleeceyn fara badan oo labada xisbi ee Mareykanka ku weerareen Sucuudiga iyaga oo codsaday in la joojiyo hubka laga iibinayo Riyadh maadaama duqeymahaasi ay nolosha u qoonsadeen kumannaan qof oo biri-mageydo ah sida ay ku warramayaan hey’adaha xuquuqul insaanka u dooda.
Kal hore ayay ahayd markii ay dowladda Norwey kala noqotay dhammaan shatiyadii dowladda Sucuudiga ay hubka kaga iibsan jirtay Norway.
Khubaro ka tirsan hey’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa rumeysan in isbahaysiga uu hor boodayo Sucuudigu uu gabood fallo aadane ka geystay Yemen sidoo kalena cuna qabateynta la saaray Yemen ay sababtay in in kabadan 14 milyan oo ruux ay qarka u saran yihiin inay u geeriyoodaan macaluul aawadeed.
Shirkii saddex geesoodka ahaa ee Bahar Dar oo bayaan laga soo saaray
Madaxweynaha Somaliland oo sameeyay isku shaandheyntii ugu horreysay